A: Interview ဝင်မယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက်စောစော (သို့) တိတိကျကျရောက်နိုင်အောင်သွားပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။ မေးတဲ့မေးခွန်းကို သိရင်သိတဲ့အလျောက်၊ မသိရင်လည်း မသိတဲ့အကြောင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြေ/ ပြောပြပါ။ အရမ်းကြီးကြောက်တဲ့စိတ် မဖြစ်ပါနဲ့။ တစ်ချို့ အလုပ်ရမှဖြစ်မယ့် ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ အခြေအနေမျိုး ရှိတတ်/ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် "ငါ ရပါ့မလား။ ဒီအလုပ်မှမရရင်တော့ ဒုက္ခပါပဲ။" ဆိုပြီး စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေ ကြောက်စိတ်များနေရင် အမှားပါတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကို လျှော့ချထား။ စိတ်အေးရင် ဉာဏ်ပွင့်ပါတယ်။ ကိုယ်မသိတာပါခဲ့ရင်လည်း မသိတဲ့အကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြပြီး ကိုယ်က လေ့လာသင်ယူချင်စိတ်ရှိပြီး တတ်မြောက်လွယ်တဲ့အကြောင်း ပြောပေါ့။ မသွားခင် ကိုယ့်ကို ဗျူးမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ Profile ကို လေ့လာသွားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုနိုင်မှာ။ လစာကိုလည်း ကိုယ်ဒီလောက်တော့ ရသင့်တယ်ထင်ရင် တောင်းရမှာ မကြောက်ပါနဲ့။ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီတွေက ကိုယ့်ကို ဘာမေးချင်တာရှိလဲဆိုပြီး မေးပါတယ်။ သူတို့ကပြောမလာရင်လည်း ပြီးသွားတဲ့အခါ မေးခွင့်ပြုပါဆိုပြီး လုပ်ငန်းသဘာဝ၊ ကိုယ့်ရပိုင်ခံစားခွင့်ရှိမယ့် ကိုယ်သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို သေချာမေးပါ။ အလုပ်ချိန်၊ အစမ်းခန့်ကာလ၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ အချိန်ပို၊ (တစ်ချို့က Phone Allowance, Transport Allowance ပေးတတ်တယ်) တစ်နှစ်တစ်ခါ ဘောနပ်၊ လစာတိုးတာရှိလား စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် နေရာ၊ အတူတူဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ရမယ့်သူတွေ အကြောင်း မေးရင်းပြောရင်းနဲ့ နောက်တော့ Interview နဲ့ မတူတော့ပဲ ရင်းနှီးမှုလေးရှိလာပြီး မိတ်ဆွေအချင်းချင်း ထမင်းလက်ဆုံစားရင်း စကားပြောနေသလိုမျိုး မိသားစုအကြောင်းလေးတွေပါ မေးလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြောအဆိုကျွမ်းကျင်မှုကို လူကြီးတွေ အကဲခတ်သိနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ အင်တာဗျုးမျိုးမှာ ဘာလို့ပြောင်းချင်တာလဲလို့ မေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အရင်ကုမ္ပဏီက တကယ်လို့ အရမ်းဆိုးနေခဲ့ရင်တောင် မကောင်းကြောင်းမပြောပဲ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်၊ အတွေ့အကြုံအသစ်လိုချင်လို့ပါလို့ ပြောပေါ့။ အစ်မကိုမေးတုန်းကတော့ လက်ရှိအလုပ်မှာလည်း အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ လစာပိုလိုချင်လို့ပါလို့ပဲ အမှန်အတိုင်းပဲ ဖြေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Resume မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖော်ပြထားတဲ့ အရည်အချင်းတွေအပေါ်မှာလည်း ကိုယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါမယ်။ အရမ်းကြီးကျွမ်းကျင်မနေနိုင်ရင်တောင်မှ အနည်းအကျဉ်းတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့ကတော့ အစ်မအပါအဝင် တော်တော်များများကတော့ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ခွဲပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရပေမယ့် ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းနဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ကျွမ်းကျင်မှုအရ ထိုက်သင့်တဲ့လစာနဲ့ အခွင့်အလမ်းလေး ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လာချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေက ဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ အစ်မလည်း သိပ်နားမလည်ပါဘူး။
Q: ပညာသင်ကြားခဲ့စဉ်အချိန်တွေမှာ အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ဖူးရင် ယင်းအခက်ခဲတွေနှင့် ဘယ်လိုကျော်လွှားခဲ့ရသလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါလားရှင်။
A: မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ အခက်အခဲ အထွေအထူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ NUS မှာ တက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး နိုင်ငံရပ်ခြားက နာမည်ကြီးအစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆိုတဲ့ အရှိန်ကလည်း ကြီးတယ်။ ဆရာတွေက Guideline ပဲပေးတာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Self-study လုပ်ရတာ။ Library မှာ စာအုပ်တွေငှားဖတ်ရတယ်။ Internet မှာ ရှာဖတ်ရတယ်။ Project တွေ၊ Presentation တွေ၊ Assignment တွေ၊ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးအောင်လုပ်ရတယ်။ First Semester စစတက်တုန်းက ရောက်ခါစဆိုတော့ မပြောရဲ မဆိုရဲ၊ Foreigner တွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ရဲ၊ သူတို့ရဲ့အသံထွက် လေယူလေသိမ်းကို မကျက်မိ၊ တော်တော်လေးဂရုစိုက်နားထောင်ရတယ်။ ကျောင်းကဆရာတွေပေးတဲ့ Lecture Notes နဲ့တင်မလုံလောက်ဘူး။ အပြင်စာတွေ ရှာဖတ်ရတယ်။ တကယ်က Project တို့၊ Presentation တို့၊ Assignment တို့ အတွက်က Foreigner တွေနဲ့ အတူတွဲလုပ်တာက ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး ဗဟုသုတ ပိုရတယ်။ မြန်မာတွေ အတော်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့တွဲလုပ်တော့ အတွေးအမြင်မတူတာတွေကို ကိုယ်လေ့လာသင်ယူနိုင်တာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး၊ မသိတာ ရှင်းပြ၊ အချင်းချင်းဖေးမ တွဲခေါ်တတ်တဲ့သူတွေ ရှိသလို ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာစိုးရိမ်လို့ လျှိုထားတတ်တဲ့သူတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီရောက်မှ တွေ့သိခင်မင်ရပေမယ့် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့ အတူတူကြိုးစားပြီး ညီအစ်မအရင်းတွေလို သွေးစည်းချစ်ခင်သွားတဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် နိုင်ချင်စိတ်တွေနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲသွားကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ ပညာဆိုတာ ကိုယ်သိတာ သူများကိုပြန်ရှင်းပြပြောပြလေ ကိုယ်ပိုပြီးနားလည်မှတ်မိလေပါပဲ။ ပညာမျှဝေရတာ သိပ်ကုသိုလ်ရပါတယ်။ အစ်မတို့ မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူအချို့က ကျောင်းစာတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ပူပင်ရတာ မဟုတ်သေးဘူး။ ကျောင်းလခ 80% ကို DBS Bank က ချေးပေးပေမယ့်၊ ကျန်တဲ့ 20% ရယ်၊ ကျောင်းစာရွက်စာတမ်းစရိတ်၊ နေစရိတ်၊ စားစရိတ်တွေ အတွက်လည်း Part Time အလုပ်လုပ်ပြီး ရှာရပါသေးတယ်။ တစ်ချို့က မိဘတွေ၊ အစ်ကို အစ်မတွေကတတ်နိုင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လို့ ကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ အလုပ်မလုပ်ပဲ ကျောင်းစာကိုသာ အာရုံစိုက်ရပေမယ့် အစ်မကတော့ မတတ်နိုင်တော့ ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာပါ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ စစချင်း ဖိနပ်ရောင်းတယ်။ ဒီက Promoter တွေက တစ်နေကုန် မတ်တပ်ရပ်နေရတယ်။ ပြီးတော့ ရှုးဖိနပ်ပဲစီးရတာလေ။ စီးနေကျမဟုတ်တော့ ခြေသန်းနှစ်ဖက်စလုံးက ခြေသည်းတွေတောင် ကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပန်းကန်လည်းဆေးဖူးတယ်။ ဧည့်ကြိုလည်းလုပ်ဖူးတယ်။ သူများအိမ်မှာ တစ်နာရီတစ်ဆယ်နဲ့ မီးပူလည်းသွားတိုက်ပေးဖူးတယ်။ Nypro စက်ရုံမှာ ညဆိုင်းဆင်းတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကလည်း မတ်တပ်ပဲ။ အတန်းမရှိတဲ့ရက်ဆို Full Shift (12hrs Shift) ဆင်းပြီး၊ အတန်းရှိတဲ့ရက်ဆို အတန်းက ညကိုးနာရီခွဲပြီးတာဆိုတော့ ည ၁၁ နာရီကနေ မနက် ၇ နာရီခွဲအထိဆင်း၊ နေ့လည် ခဏအိပ်၊ နိုးရင် စာနည်းနည်းကြည့်၊ ညနေကျောင်းပြန်တက်၊ ညအလုပ်ပြန်ဆင်း အဲလို လုပ်ခဲ့ရတာ။ စာမေးပွဲဖြေဖို့ နှစ်ပါတ်လောက်လိုမှ အလုပ်နားပြီး စာကိုသေချာကြည့်နိုင်တယ်။ ကျောင်းလခ 80% ကို ဘဏ်ကချေးပေးထားတာက ကျောင်းပြီး ဘွဲ့ရ အလုပ်ရပြီးမှ အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ရာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ဆပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်လို့ မအောင်မြင်ခဲ့ရင် Student Pass နဲ့နေတာဆိုတော့ Pass ကို ပြန်အပ်ပြီး ပြန်ရမှာ၊ ချေးထားတဲ့ပိုက်ဆံကို ချက်ချင်းပြန်ဆပ်ခဲ့ရမှာမို့ "ငါမအောင်မြင်ခဲ့ရင်" ဆိုတဲ့ ဖိအားကလည်း အစ်မတို့လို ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် တော်တော်လေးတာပါတယ်။ အစ်မတောင် အလုပ်တွေအရမ်းလုပ်ပြီး စာကြည့်ချိန်နည်းလို့ အမှတ်လိုသွားပြီး တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေ Semester သုံးခုနဲ့ပြတ်သွားခဲ့ပေမယ့် အစ်မက Semester လေးခုတက်လိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အခြေအနေအရ အလုပ်ကလည်း မလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ဒါတွေအကုန်လုံးပြောပြရတာက လူငယ်တွေကို ဘဝဆိုတာ ပန်းခင်းလမ်းချည်းပဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းမျိုးကိုမဆို လျှောက်ရဲဖို့၊ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့၊ ဇွဲရှိရှိကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်ဖို့၊ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိဖို့၊ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း စည်းလုံးဖို့၊ သူတစ်ပါးကို ကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိစေချင်လို့ပါ။
A: ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ စာမေးပွဲအောင်ရုံ ၊ ဘွဲ့ရရုံလေး အတွက်သာမဟုတ်ပဲ၊ တကယ်နားလည်တတ်မြောက်အောင် လေ့လာသင်ယူစေချင်ပါတယ်။ ဇွဲရှိဖို့၊ မပျင်းဖို့၊ ရည်မှန်းချက် မပျောက်စေပဲ၊ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်သည်အထိ လျှောက်စေချင်ပါတယ်။ ပညာသင်ကြားတဲ့ အချိန်မှာ အခက်အခဲလည်း ကြုံရနိုင်တယ်။ အခက်အခဲဆိုတာကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်မှ ပင်ပန်းဆင်းရဲ ခက်ခဲရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာသင်လည်း အနည်းနဲ့အများတော့ ကြုံရမှာပဲ။ အဓိကက ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲပေါ်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျမသွားဖို့ပါ။ ကြိုးစားမှုတိုင်းအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ခံစားရမှာပါ။ ပညာသင်ကြားချိန်မှာ လမ်းမှားမလိုက်မိစေဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာပြည်မှာလည်း အခုဆို တက္ကသိုလ်တွေက မြို့ပြင်မှာ မိဘနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ မိဘမျက်ကွယ်ရာမှာဆိုတော့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မယ်ဆို လက်တွေ့ဘဝမှာက ကျောင်းစာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြေအနေပေးရင်ပေးသလို ကျောင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ၊ ပြင်ပဗဟုသုတနဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကိုလည်း သင်ယူလေ့လာပါ။ ပြင်ပစာပေတွေ ဖတ်ပါ။ သို့သော် ရွေးချယ်ဖတ်မှတ်တဲ့ စာပေကလည်း မှန်ကန်ဖို့၊ စာကောင်းပေမွန်ဖြစ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။
A: နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွဲလုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကစေ့စပ်သေချာဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့က နည်းနည်းအော်တတ်ငေါက်တတ်တယ်။ တစ်ချို့က အပြစ်ရှာတတ်တယ်။ တစ်ချို့က ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရမ်းအထင်ကြီးပြီး သူတစ်ပါးကို နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်တယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တိတိကျကျ ချက်ကျလက်ကျ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခြေပနိုင်ရင် နောက်ပိုင်းကိုယ့်ကို ဘယ်သူကမှ အထင်အမြင်သေးပြီး ဆက်ဆံလို့ မရတော့ဘူး။ အစ်မ အခုကုမ္ပဏီအသစ်ကို စရောက်ရောက်ချင်းနေ့ပဲ RTO အဘိုးကြီးက အစ်မစားပွဲကို ဝုန်းဆို ခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီး နင် ဒီရီပို့တင်ရမှာ မသိဘူးလားဆိုပြီး အော်တာ။ အစ်မက အခုအရေထူနေပြီလေ။ ပြုံးပြုံးလေးပဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ခဏနေ လာတင်ပါ့မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်းလုပ်ပြီး သွားတင်လိုက်တယ်။ တစ်ပါတ်လောက်က အမျိုးမျိုး ပညာပြတာ။ အစ်မကလည်း တစ်ချက်မှ အပြုံးမပျက်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ အေးဆေးပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ အခု အဆင်ပြေသွားပြီ။ ဒါလည်း နိုင်ငံခြားသားနဲ့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူနဲ့မဆို သူအော်ကိုယ်အော် အပြန်လှန်အော်နေရင် ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က မှန်ကန်ရင် ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကိုဖျက်လို့မရဘူး။ မိမိကောင်းဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
A: လက်ကိုင်ထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေပြောပါဆိုရင်…. ဆောင်ရန်ကတော့ ရိုးသားပါ။ ကြိုးစားပါ။ သည်းခံစိတ်ရှိပါ။ ကိုယ်ချင်းစာတရားထားပါ။ လေ့လာသင်ယူပါ။ သူတစ်ပါးကို ကူညီပါ။တာဝန်သိပြီး တာဝန်ယူတတ်ပါစေ။ ရှောင်ရန်ကတော့ မလိုအပ်ပဲ စကားတွေအများကြီး မပြောပါနဲ့။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ အဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။သူတစ်ပါးကို ချောက်မတွန်းပါနဲ့။ ခေါင်းမရှောင်ပါနဲ့။
ဘဝမှာ တခါတလေ လိုချင်တာ မရ၊ ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်နဲ့ လွဲချော်မှုလေးတွေနဲ့လည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုအခါမျိုးမှာ "ငါ့ကျမှ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်၊ ကံဆိုးလိုက်တာ" ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဘယ်လိုအခြအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ စိတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ စိတ်ပျော်မှ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ စိတ်မပျာ်လို့ ကိုယ့်မျက်နှာ မကြည်မလင်နဲ့ဆို ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်လေ။ အစ်မ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်ဆံပုံကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာမှ မဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်း ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ဆိုရင် "သူက အကြီးပဲ၊ သူ့ကို အလျှော့ပေးရမယ်။" ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူနဲ့ဆိုရင် "သူကအငယ်ပဲလေ၊ သူ့ကို ဦးစားပေးရမယ်။" လို့ စိတ်ထဲမှာထားပြီး ဘယ်သူနဲ့မဆို အဲလိုဆက်ဆံပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုအော်ပြောလာတဲ့သူကို အော်တာမကြိုက်ဘူး၊ အေးအေးပြောဖို့ ပြောပြလိုက်တယ်။ ကိုယ်က Officer ပဲဆိုပြီး အလုပ်သမားလေးတွေကို တစ်ခါမှမအော်ဖူးဘူး။ ခိုင်းစရာရှိရင် ချိုချိုသာသာပဲပြောပြီးခိုင်းတယ်။ အစ်မကတော့ ကိုယ့်မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပန်းနေရတာနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုပြီး တကူးတက ဘာမှထွေထွေထူးထူး လုပ်မပေးနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသား၊ လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာ မထိခိုက်အောင်တော့ ဂရုစိုက်တယ်။ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ မြန်မာတွေ တော်တယ်ဆိုတဲ့ အသံမျိုးပဲကြားရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားတယ်။
A: တိုင်းတပါးမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲက မလွဲမသွေကြုံရမှာပါ။ အသံထွက်၊ လေယူလေသိမ်းကစလို့ ပြောပုံဆိုပုံအားလုံး သူတို့နဲ့ ကိုယ်နဲ့မတူပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အသံနေအသံထားကို ကျက်မိဖို့လိုသလို ကိုယ်ဆိုလိုချင်တာသူများနားလည်အောင်ပြောနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တို့၊ ကျောင်းတို့၊ ရုံးချုပ်တို့လို ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ English Skill က ကိုယ်ယူနိုင်ရင်နိုင်သလောက် တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ စင်္ကာပူရီရန်တွေပြောတဲ့ Singlish လို့ခေါ်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေကျပြန်တော့လည်း ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ အခြေခံလေးတွေတောင် ပျက်ချင်ချင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Construction Site ထဲမှာ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပြောရတဲ့စကားတွေကတော့ Broken English တကယ့်ကိုမှ ကပေါက်တိကပေါက်ချာပါပဲ။ ဆိုဒ်ထဲမှာအလုပ်သမားအများစုက တရုတ်ပြည်က တရုတ်တွေပါ။ အင်္ဂလိပ်လို လုံးဝမတတ်ပါဘူး။ မြန်မာ၊ ယိုးဒယားနဲ့ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားကုလားတွေကမှ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်၊ ပြောဆိုတတ်သေးတယ်။ ကိုယ်ကလည်း တရုတ်လိုမတတ်ဆိုတော့ သူတို့ကို ထိန်းရတာ သိပ်ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာ၊ လုပ်သင့်တာနဲ့မလုပ်သင့်တာကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ပုံမှာ အမှန်နဲ့အမှား ခြစ်ပြီး လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြောပြရတယ်။ တခါတလေ ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ ပိုစတာတွေဆိုလည်း အင်္ဂလိပ်လိုဆို သူတုိ့နားမလည်လို့ မလိုက်နာမိတာပါလို့ ဖြစ်မှာစိုးလို့ တရုတ်လိုပါ ရေးပေးရပါတယ်။ အဲလိုအခါမျိုးမှာ Google Translate ကို အားကိုးရပါတယ်။ ဥပမာ - "ဆေးလိပ်မသောက်ရ" ဆိုရင် "No Smoking" ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ Google Translate က ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ တရုတ်စာကို ကော်ပီကူးပြီးသုံးရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တခါတလေကျတော့ သူဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာက တလွဲဖြစ်တတ်သေးတယ်။ ကိုယ်လိုတာလဲပါတာပေါ့။ အစ်မက "Hardcore Bin" လို့ ကိုယ်လိုချင်တာ တိုက်ရိုက် ရိုက်ထည့်လိုက်တာ။ ထွက်လာတဲ့ ဘာသာပြန်က တကယ့်တလွဲ။ Sex နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့။ Site Manager က တရုတ်ဆိုတော့ အချောမထုတ်သေးခင်၊ပလပ်စတစ်မလောင်းခင် အကြမ်းတရွက်ထုတ်ပြီး သူ့ကိုတစ်ချက်စစ်ခိုင်းလိုက်မိလို့ တော်သေးတယ်။ SM က "အောင်မလေး၊ မင်းမင်းရေ၊ မင်းအဲဒီဆိုင်းဘုတ်သာ သွားထောင်ထားလိုက်ရင် တရုတ်တွေ အကုန်လုံး ဝိုင်းရယ်ကြလိမ့်မယ်" တဲ့။ ပြီးတော့မှ သူရှာပေးတယ်။ "Concrete Waste" ဆိုမှ အမှန်ထွက်လာတယ်။ မှတ်ထားရတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထည့်၊ ရလာတဲ့ တရုတ်လိုကို ကော်ပီကူး၊ အင်္ဂလိပ်လို တစ်ခါပြန်တိုက်၊ အဲလိုလုပ်ရတော့တယ်။ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင်တော့ တရုတ်စာ၊ တရုတ်စကားလေးပါ နည်းနည်းလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Construction Site ထဲ အလုပ်သမားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အလုပ်မှာမဆို တရုတ်စကားတတ်တဲ့သူက သူများထက် တစ်ပန်းသာပါတယ်။
Q: နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်ရာမှာ ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ဝေမျှပေးပါလား။
A: အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လေးလေးစားစား လိုလိုချင်ချင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်ဆံရာမှာလည်း အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ ဆက်ဆံပါ။ အချိန်ကို လေးစားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ အလုပ်ချိန်ကို နောက်မကျပါစေနဲ့။ တကယ်လို့ အရေးကြီးကိစ္စကြောင့် နောက်ကျမယ်ဆိုရင်လည်း အထက်လူကြီးကို ဖြစ်ဖြစ်၊ Admin ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းဆက်/ Message ပို့ပြီး အကြောင်းကြားပါ။ သူ့အလုပ်၊ ကိုယ့်အလုပ် မခွဲခြားပဲ အတူတူ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပါ။ အစ်မကတော့ ကိုယ့်ကိုလုပ်ခိုင်းလာရင် ကိုယ့်ရဲ့ Job Scope ထဲမှာ မပါလည်း ကိုယ့်မှာ အချိန်ရှိရင် လုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။ အချိန်အပိုမရှိလည်း နောက်ကျမှ ပြန်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်အိပ်ချိန်လျှော့ပြီး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ်မလုပ်တတ်တဲ့ အသစ်အဆန်းဆိုလည်း ကြိုးစားလေ့လာပြီး လုပ်ပေးတယ်။ ကိုယ့်ကို များများခိုင်းလေ၊ များများလုပ်လေ၊ ကိုယ်များများတတ်လေပဲလို့ အစ်မစိတ်ထဲမှာ အဲလိုပဲ ခံယူထားပြီး ဘာခိုင်းခိုင်း တစ်ခါမှ မငြင်းခဲ့ဘူး။ သူတစ်ပါးကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်လေး မွေးမြူပါ။ သည်းခံစိတ်ထားပါ။ ဒါတွေက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွဲလုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အရပ်ဒေသ၊ ဘယ်သူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် အလုပ်မှာ အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာပါ။
Education: ●1. Master of Science (Environmental Engineering) – 2006 ~ 2008 (National University of Singapore (NUS)) ●2. Master of Engineering (Chemical) – 2003 ~ 2005 (Yangon Technological University) ●3. Bachelor of Engineering (Chemical) – 1997 ~ 2001 (Yangon Technological University) ●4. Bachelor of Science (Industrial Chemistry) – 1993 ~ 1995 (Yangon University) a) Environmental Control Officer - ECO (NEA) b) Advanced Certificate in Workplace Safety & Health - ACWSH (BCA) c) Building Construction Safety Supervisor - BCSS d) Work At Height (Supervisor) - WAH e) Chemical Safety Awareness (NTUC Learning Hub) f) Safety Instruction Course (Manhole) for Supervisors g) Safety & Health Management Workshop h) Workshop on Building & Auditing Safety Culture Model